Chikiny Chicken Casserole - Ezi Ntụziaka
esi edochi ohuru inine maka oyi
ole ala beef maka tacos maka 6
kacha mma ịkpụ anụ maka ebido ighe
mgbawa itinye Ezi ntụziaka na ude chiiz
Chikiny Chicken Casserole
Cheesy Chicken Casserole bụ ihe dị mfe casserole dị mfe mgbe ị dị mkpụmkpụ (ma ọ bụ ihe oriri)!
A na-etinye pasita na ọkụkọ, ose, yabasị, ma gwakọta ya n'ụzọ dịtụ mma ofe. N'ikpeazụ, ọkụkọ a A na-etinyezi usoro ntụ ọka a na-etinyekwu na chiiz ma sie ruo mgbe ọ ga-agbaze ma na-agba agba.
Jikwa ya n'akụkụ salad ọhụrụ na ụfọdụ Mfe Ime ụlọ Buttermilk Biscuits maka nri zuru oke.
Ihe kpatara m ji hụ Chicken Casserole a n'anya
Ọ bụrụ na ị na-achọ nri abalị izu ụka, cheesy chicken casserole bụ azịza gị. Ọ bụ ibu ngwa ngwa ime .
Ị nwere ike jiri foduru ma ọ bụ ọkụkọ rotisserie ma ọ bụ mee poached anụ ọkụkọ (ọ magburu onwe ya na butere ara okuko Ọzọkwa)!
Gbanwee wepụ ude mmiri ofe ọkụkọ maka ude nke ero ma ọ bụ celery na efere a.
Nke a na cheesy chicken casserole nwere ike ịbụ prepped tupu oge eruo ma debe ya na ngwa nju oyi ruo mgbe ị dị njikere ime ya pụtara na ị nwere ike ime ya n'abalị a ma sie ya echi!
Ndụmọdụ & Mgbanwe
Enwere ike ịmegharị casserole ọkụkọ a dị mfe iji jiri ihe ọ bụla inwere na ngwa nju oyi gị:
Azụ ọkụkọ bụ staple isi ebe niile, nke a na-etinyekarị na chiiz.
Akwụkwọ nri: Esi nri na / ma ọ bụ kpochapụ nri gị tupu ị gbakwunye na casserole a. Mushrooms, diced tomato (drained ma ọ bụrụ na-eji mkpọ), fọdụrụnụ Zucchini Grill ma ọ bụ ihe a roara n’ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Onyinye: Pasta nke ọ bụla ga-arụ ọrụ na nhazi a. Jide n'aka na esi nri ya al dente (ya mere ọ ka dị ntakịrị), ọ ga-esi nri karịa na oven.
Ọkụkọ: gbanwee ya maka turkey ma ọ bụ ham ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe niile ị nwere n'aka.
Ihendori: Jiri ude nke ihe ọ bụla ị ga-enwe - n’ime ụlọ nri gị (ma ọ bụ mee ụlọ) condensed ero ofe ). N'ezie ụdị cheese ọ bụla na-aga ebe a!
Topping: Azụ ọkụkọ bụ staple isi ebe niile, nke a na-etinyekarị na chiiz.
Ọ dịkwa mma na bred achịcha topping. Ikpokọta 3 tablespoons panko crumbs na 1 tablespoon gbazee butter (tinye a bit nke garlic ntụ ntụ, nnu & ose kwa). Wụsaa n’elu ya ma mee achịcha dịka agwara gị.
Otu esi eme achicha okuko
Nzọụkwụ iji mee ka ọkụkọ ọkụkọ a dị mfe:
Obụpde pasta al dente.
Mee nro na yabasị na ose na bọta.
Gwakọta ihendori na ihendori. Kpoo ọkụkọ na pasta.
Top na chiiz na akpọọ nkụ ruo mgbe ọ na-ebu ibu.
Were ya na akụkụ kachasị amasị gị ma nwee ọ !ụ!
Iji kpoo ya, kpoo ya na oven na 350 ihe dị ka nkeji 20! Ọ bụrụ na ihendori bụ creamy sauce dị ka a mac na chiiz , M na-agbakwunyekarị mmiri ara ehi na mkpuchi tupu kpoo ọkụ.
Ọ bụrụ na ị na-eji ngwa ndakwa nri iji kpoo ọkụkọ ọkụkọ ọkụkọ, gbakwunye mmiri ara ehi na efere ma kpalite ya ọkara ụzọ site na nri iji mee ka ọ ghara ihichapụ.
Soro Na-eje Ozi
Ntụziaka ọkụkọ casserole a dị mfe ma ọ dịghị mkpa maka akụkụ. A tomato ọhụrụ ma ọ bụ kalee salad na achịcha mebiri emebi ma ọ bụ Nkeji 30 nri abalị -eme nri zuru oke!
leftover toki casserole na ude nke ero ofe
Ọkụkọ Na-amasịkarị Gị Casseroles
Osikapa Chicken Casserole - Mfe!
Chicken inine Artichoke Casserole - Ya mere creamy!
Ọkụkọ Chicken na osikapa
Mfe Broccoli Rice Casserole na Turkey (ma ọ bụ Ọkụkọ)
Chicken Chicken na Osikapa - Agụ ọkacha mmasị!
Enjoy nwere mmasị na nke a Cheesy Chicken Casserole? Jide n'aka na ị ga-ahapụ ọkwa na ikwu n'okpuru!
4,95site na209votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe30 Nkeji Oge nri30 Nkeji Oge zuru ezu1 aka elekere Ọrụ6 servings Onye edemedeHolly Nilsson Cheesy Chicken Casserole nwere pasta na creamy cheesy ihendori butere ruo mgbe ọlaedo na bubbly. Bipute Ntụtụ
▢3 iko shei noodles esighe
▢3 tablespoons bọta
▢⅓ iko uhie mgbịrịgba okpokoro
▢1 yabasị finely diced
▢½ ngaji nnú nnu
▢1 ngaji chili ntụ ntụ
▢10 ounce ude nke ọkụkọ ofe kechiri ọnụ
▢1 ⅓ iko mmiri ara
▢3 iko nkọ cheddar chiiz shred, kewaa
▢⅓ iko parmesan chiiz shred
▢4 ounce obere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ chiles
▢3 iko sie ọkụkọ
Okpomọkụ ọkụ na 375 Celsius F.
Cook shells al dente dị ka usoro ngwugwu.
Cook yabasị na ose mgbịrịgba uhie na bọta ruo mgbe obi dị nro, ihe dị ka nkeji 5. Nwuo na nnu na chili ntụ ntụ.
N'ime nnukwu efere jikọtara ofe, ngwakọta yabasị, mmiri ara ehi na iko 2 cheese cheese na cheese parmesan. Gwakọta nke ọma. Kpoo ọkụkọ, pasta na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Gbasaa n'ime efere 9x13 casserole. Top ya na cheese fọdụrụ.
Mee 30-35 nkeji ma ọ bụ ruo mgbe ọ na-ekpo ọkụ ma na-afụ ụfụ.
Pasta nke ọ bụla ga-arụ ọrụ na nhazi a. Jide n'aka na esi nri ya mere o ka siri ike, ọ ga-esikwukwu na oven. Ntụziaka a bụ ihe dịgasị iche, ị nwere ike gbanwee ọkụkọ maka ham ma ọ bụ toki. Ọ bụrụ n’itinyekwu akwụkwọ nri, gbaa mbọ hụ na ha esiiri ya (nke fọrọ afọ na-arụ ọrụ nke ọma). Iji tinye achicha obere achicha topping: Ikpokọta 3 tablespoons panko crumbs na 1 tablespoon gbazee butter (tinye fesaa nke garlic ntụ ntụ, nnu & ose). Wụsaa ebe a na-eme achịcha ma mee achịcha dịka a gwara gị.
Calorisị:649,Carbohydrates:32g,Protein:40g,Abụba:39g,Abụba Ajuju:iri abụọg,Cholesterol:138mg,Sodium:1197mg,Potassium:445mg,Eriri:1g,Sugar:5g,Vitamin A:1420IU,Vitamin C:18.4mg,Calcium:573mg,Iron:Ugboro abụọmg
IsiokwuỌkụkọ akpịrị, anụ ọkụkọ, anụ ọkụkọ mara nri N'ezieCasserole, Isi N'ezie Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Gbanyụọ Mfe Casserole a